Lufthansa Tsy mandray intsony 'tompokolahy sy tompokovavy'
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Lufthansa Tsy mandray intsony 'tompokolahy sy tompokovavy'
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovao Mafana Alemana • LGBTQ • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Lufthansa dia tsy mandray intsony 'tompokolahy sy tompokovavy'
Lufthansa dia hanafoana ny fiarahabana ireo vehivavy sy tompokovavy nentim-paharazana ho an'ireo mpandeha ho solon'ny safidy tsy mitongilana toy ny 'vahiny malala' na 'salama maraina / hariva.'
Ny mpandeha Lufthansa dia homena safidy fahatelo ho an'ny lahy sy ny vavy mandritra ny fizotran'ny famandrihana.
Lufthansa no mpitatitra fiaramanidina lehibe farany nanambara ny 'fanovana' toy izany niditra tao amin'ny Air Canada sy Japan Airlines.
Nilaza ny mpitondra tenin'i Lufthansa fa ny fifandraisana anatiny sy ny ekipa rehetra dia hatao “ara-drariny miralenta” koa.
Mpandeha fiaramanidina mitaingina a Lufthansa Ny sidina ato ho ato dia tsy handre intsony ny “Meine Damen und Herren” na “tompokolahy sy tompokovavy”, hoy ny mpitondra tenin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka androany.
Lufthansa no mpitatitra fiaramanidina lehibe farany nanambara ny fanovana toy izany Air Madagascar ary Japana Airlines.
Ho fanampin'izany, ny mpandeha Lufthansa dia homena safidy fahatelo ho an'ny lahy sy ny vavy mandritra ny fizotran'ny famandrihana, miaraka amin'ny "lahy" sy "vehivavy."
Horosoana miandalana ny fanovana amin'ny sidina Lufthansa, ary koa ny sidina Swiss, Austrian, Bruxelles ary Eurowings, izay zanaky ny Lufthansa.
Lfthansa Group dia nilaza fa ny fiovana dia valin'ny "fifanakalozan-kevitra izay natao tao amin'ny fiarahamonina" noho ny maha-lahy na maha-vavy, ary avy amin'ny faniriana "hanome lanja ireo vahiny rehetra ao anaty sambo."
Na dia nambara androany aza, efa ho iray volana izao ny fiovana. Nilaza ny mpitondra tenin'i Lufthansa tamin'ny volana Jona fa ny fifandraisana anatiny sy ny ekipa rehetra dia hatao “ara-drariny miralenta” ihany koa.
Ny Air Canada no zotram-piaramanidina voalohany nametraka fahalalam-pomba nentim-paharazana noho ny fahatsapana maoderina rehefa nanolo ny “andriambavilanitra” tamin'ny “olon-drehetra” tamin'ny taona 2019. Tahaka an'i Lufthansa, nanolotra safidy lahy sy vavy fahatelo tamin'ny tranokalan'ny famandrihana ihany koa izy.
Nanaraka ny Japan Airlines tamin'ny taona 2020, saingy ny fanovana natao tamin'ny fanambarana anglisy ihany no nampihariny. Tsy ny fiaraha-monina japoney ihany no tsy mandray tsara ny fomba fanabeazana amin'ny fomba tandrefana (ohatra, tsy ara-dalàna, ohatra, ny fanambadian'ny mitovy fananahana), ny fiarahabana amin'ny fiteny japoney be mpampiasa indrindra dia efa tsy mitanila.